Lafta gareen Oo Lacagihii Ka jartay Ciidankiisa qaar (Sababta) | SMC
Home WARARKA MAANTA Lafta gareen Oo Lacagihii Ka jartay Ciidankiisa qaar (Sababta)
Lafta gareen Oo Lacagihii Ka jartay Ciidankiisa qaar (Sababta)
Cabdicasiis Lafta gareen ayaa la sheegay inuu lacagti ka jartay ciidamada daraawiishata maamulkaasi gaar ahaan kuwa ku sugan degmada Diinsoor ee Gobolka Baay.
Ciidamada ayaa bilooyinkii danbe qaadan wax mushaar ah waxeyna sheegeen in lacagtii loogu tala galay uu jartay Cabdicasiis Lafta gareen waxeyna hadda sheegayaan in nolal xumo ay ku haysto degmada Maaylanda.
Sidoo kale waxa ay sheegeen ciidankani in ay ka go’day cuntadi oo ay hada qarka u saaran yihiin in ay ka soo baxaqn xarumahooda.
Degmada Diinsoor waxaa joogta in ka badan 500 oo askari ah kuwasi oo maamulka uu ugu tala galay in ay xoreeyaan deegaanada hoos yimada degmadaasi Diinsoor ee gobalka Baay jamhuriyada barakaysan maylanda.
Degmada Diinsoor waxa mudooyinkii danbe ka taagnaa xaalad tii ugu adkeyd waxana la sheegay in ay go’doomiyeen degmadaasi al shabaab kiilada bariska ama kiilada baastada ayaa waxay degmadasi ka mareysa 2 dolar ama konton kun shillin somali halka kiilada sonkorta ay ka mareyso 2.5 dollar.
Next articleXOG: RW Rooble oo faragelin kala kulmaya Fahad Yaasiin & halis ka jirta dhismaha Wasiirada cusub